VaMugabe naVaTsvangirai Vokandirana Makobvu neMatete
Musangano wekuyedza kugadzirisa zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa wave kutarisirwa kuitwa zvekare neChina mushure mekunge pakandiranwa makobvu nematete neMuvhuro pakati pemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachitsigirwa nemutevedzeri wavo, VaArthur Mutambara.
Kusawirirana pakati pevatatu ava kwakapa kuti vadane vamwe vakabatsira mukunyora chibvumirano cheInterparty Political Agreement vachimirira mapato matatu anoti Zanu-PF, MDC inotungamirwa naVaTsvangirai, neMDC inotungamirwa naVaMutambara.
Vakadanwa vanosanganisa VaTendai Biti, gurukota rezvemari uye vari munyori mukuru muMDC inotungamirwa naVaTsvangirai, VaWelshman Ncube, munyori mukuru mu MDC inotungamirwa naVaMutambara, uye VaPatrick Chinamasa veZanu-PF.
Nyaya dziri kunetsa inyaya yemhirizhonga mumapurazi, kudomwa kwemagavhuna nevanyori vemapazi ehurumende naVaMugabe vasina kusuma vamwe vavo sezvinodiwa nechibvumirano chavakanyorerana pasi, kusatoreswa mhiko semutevedzeri wegurukota rezvekurima kuri kuitwa VaRoy Bennet naVaMugabe, uye kutorerwa masimba kuri kuitwa gurukota rezvehumhizha hwekufambiswa kwemashoko, VaNelson Chamisa, achipihwa VaNicholas Goche, avo vanoona nezvekufambiswa kwezvinhu.
Mushure mekunge VaMugabe vaomesa musoro vachiti ivo vane simba rekuita izvi, pakazodaidzwa vamwe vakabatsira pakuumba chibvumirano ichi. Asi gurukota rinoshanda muhofisi yaVaTsvangirai, VaGorden Moyo, vati vakabatsira ava vainge vatoripo kare kuti vajekese kuti mumwe nemumwe pakati pavatsvangirai naVaMugabe nevatevedzeri vavo vane masimba api.
VaCharles Mangongera vanoongorora nyaya dzezvematongwero enyika. VaMangongera vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti VaMugabe vari kuda kufadza vanhu veZanu-PF nekuramba kunzwisisa kwavo.
Zvichakadaro, MDC yambopemberera mangwanani aeMuvhuro mushure mekunge dare rati VaBennet vasaende kumapurisa katatu pasvondo, asi kamwe chete. Asi sedova remuchirimo, mafaro aya abva apera apo nhengo dzeMDC dzainge dzambosunungurwa neChishanu, dzakasungwa neChipiri kuchipatara cheAvenues Clinic.
Vasungwa ndiVaGandhi Mudzingwa, avo vaimbova chipangamazano chaVaTsvangirai, uye VaChris Dhlamini, vanova Director of Secutity. Magadhijere masere ange akapakatira pfuti anonzi achengetedza vasungwa ava kuchipatara ichi. Vasungwa ava vakapambwa muna zvita.. VaNelson Chamisa ndivo mutauriri weMDC.
VaChamisa vaudza Studio7 kuti kuita kwakadai kunokanganisa chibvumirano chehurumende yemubatanidzwa.